10ka Amar ee Hormarinta Webka Casriga ah | Martech Zone
Khamiista, Febraayo 15, 2007 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Isgaarsiinta ayaa fure u ah Maareeyaha Waxsoosaarka shirkadda softiweer. Dhawaan, waxaan ka shaqeeyay oo aan daabacay "amarrada" soo socda ee horumarinta shabakadda casriga ah si loogu qaybiyo kooxaheena. Soo saare web kasta oo casri ah (ama codsi) waa inuu raacaa tobankan amar.
Waxaa jira sheeko shuruudaha barnaamijka taas waa loo tuuri karaa waxyaalahan oo dhan; si kastaba ha noqotee, hadafkeygu wuxuu ahaa in kuwan lagu daro ereyo wadaag ah in xirfadlayaasha softiweerka (iyo xitaa adiga) ay fahmi karaan
Had iyo jeer taageer 99% dadka isticmaala internetka, iyadoon loo eegin biraawsarka, nooca biraawsarka, ama nidaamka qalliinka. Isku hagaaji oo had iyo jeer ku diyaarso sii deynta beta.
Had iyo jeer u isticmaal lambarka 'XHTML' u hoggaansamida arjiga, tixraaca 'DTD' iyo waraaqaha 'Cascading Style Sheets' ee ku habboon dhammaan qaababka qaabeynta iyo sawirada dalabka.
Had iyo jeer tixraac qoraalka iyo xargaha adoo adeegsanaya walxo tixraac ah oo taageeraya dabeecad kasta oo dejisan oo aan marnaba u baahnayn dhisme.
Had iyo jeer tixraac taariikhaha iyo waqtiyada GMT taas oo u oggolaanaysa isticmaale kasta inuu wax ka beddelo wax soo saarka sida ay u doonayaan.
Had iyo jeer u dhis walxo is-dhexgal sifo kasta.
Had iyo jeer u dhis heerarka RFC (emaylka qoraalka, emaylka HTML, cinwaanada emaylka, tixraacyada domain, iwm.)
Had iyo jeer si dhis ah u dhis. Haddii ay jiraan wax ka badan hal ikhtiyaar meel kasta oo dalabka ah, waa inaad awood u leedahay inaad ku darto wax intaa ka badan adigoon u baahnayn dhisme.
Haddii in kabadan hal qeyb oo arjiga ah ay sameyso, dhamaan qeybaha arjiga waa inay tixraacaan hal dhibic.
Marnaba dib ha u abuurin waxaad iibsan karto oo had iyo jeer hagaaji dalabkeena si aan u taageerno waxaad soo iibsatay.
Haddii isticmaaleyaashu ay sameyn karaan, markaa waan taageersanahay. Haddii aysan sameynin, waa inaan ku ansaxino.
Febraayo 17, 2007 saacadu markay tahay 5: 54 AM
Lagu heshiiyay. Si kastaba ha noqotee iyada oo ku saleysan qodobka 7. waxaan aaminsanahay in xitaa horumarinta webka, xogta, matalaadda (GUI'S) iyo caqliga ganacsiga marwalba lagu kala saarayo iyadoo lagu saleynayo qaab MVC ku saleysan.
Tani waxay kordhin doontaa, tayada barnaamijka, iyo isugeyn.
Feb 17, 2007 markay ahayd 1:50 PM
Mahadsanid, Andreas! Taasi waa hubaal ruuxa # 7 - faallooyinkaaga faallooyinka ayaa si cad u badan.